Weydiin - Wikipedia
Boga "Su'aal" halkan ayaa laga soo toosiyay.
Weeydiin (Af Ingiriis : question; Reer aw xasan waa beel kamid ah‎) sidoo kale loo yaqaano Su'aal iyo Weeydiimo, waa hab ka mid ah xidhiidhka luuqada taasi oo loo isticmaalo codsiga warbixin iyo faahfaahin ku saabsan meel, qof ama shey. Su'aashu waa nidaamka lagu raadiyo warbixin badan oo sharaxaysa waxa su'aashu ka socoto. Intaasi waxaa dheer, weeydiinta waxaa ka dambeysa jawaab oo ah mida ka warbixineysa su'aasha meeshaas taala.
Si la mid ah ereyo badan oo ku jira luuqada Soomaaliga, ereyga Su'aal waxaan ka soo xiganay luuqada Carabiga ereyga "سؤال". Sida saxda ah, ereyga Weydiin ama Weydiimo ayaa ah mid Af-Soomaali sax ah.
Ilaa hada ma jiraan tiro la isku afgartey oo loo qeeybiyo su'aalaha laakiin waxaa si fiican u ognahay ineey jiraan dhowr nooc oo su'aalo ah.
Su'aal toos ah: Weydiimooyinka noocan ah waa kuwa ugu badan ee dadku isticmaalaan maalin kasta waxayna inta ugu badan soo gudbinayaan codsiga faahfaahin iyo sharaxaad badan oo ku saabsan qof, meel, sheey iyo wixii la mid ah. Tusaale:
"Halkeed ka shaqeysaa?"
"Waxbarashada heerkeed ka gaadhay?"
Su'aal haa ama maya: Su'aalaha noocan ah waxay leeyihiin jawaab kooban oo ah haa ama maya. Inta ugu badan weydiimahan waxay yimaadaan marka qofka wax su'aalayo haysto xoogaa akhbaar ah ama macluumaad kooban. Tusaale:
"Aqalkan miyaad degan tahay?"
"Gabadhani ma walaashaa baa?"
Su'aal leh fikrad: waxaa jira weeydiimo wadata warbixin iyo faahfaahin ku filan oo kaliya ujeedadu tahay ogolaanshaha iyo ku raacitaanka qofka kale. Su'aalaha noocan ah marar badan uma baahna jawaab ama wercilin, laakiin lafdhabarta weydiintani waxay tahay bilaabida dood furan. Tusaale:
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Weydiin&oldid=223783"